ỌSỤN;YOROBA MEENU KA ANAMBARA – hoo!haa!!
Ka ndi Ọsụn Steeti na-aga imegharị nhọpụta Gọvanọ steeti ahụ taa n’ọgbọ nta nhọpụta (polling station) ole mole, ndi Yoroba kwesịrị ka uche ha dị ya.
Ha gbaa mbọ mee ka ndi Anambara. Na nhọpụta Gọvanọ Anambara n’afọ gara aga, Anambara mere ihe emetubeghị mbụ site na ịhụ na inye Aka na-achị steeti ahụ, onye ji aha APGA zọọ ọkwa nkwado zuru oke. N’agbanyeghị na Obianọ abụghị nnu, nke na-atọ madụ nile ụtọ, ndi Anambara leghaara okwu ọbụla ma ọ bụ iwe ọbụla ha na-ewere ya ma nyekwa ya mmeri n’Okpuru Ọchịchị Iri abụọ n’otu(21) nile dị na steeti ahụ. Nke mere o ji bụrụ Gọvanọ 21/21.
Ọ bụghị sọọsọ na ndi Anambara mere ka ndi Igbo gboo gboo site na ịchị izu ma mekwaa ihe ha kpebiri n’izu kama o nweghị onye gbara Obianọ akwụkwọ n’ụlọikpe maka ya bụ nhọpụta.
Nkea bụ n’ihi na Igbo achọghị ka “Awụsa bata Ọka”. Ndigbo sịrị na ọ na-abụ “achụpụchaa egbe bịara iburu nwa uriom tupu ajụwa nwa uriom ihe mere o jiri kpafuo”
N’ezie, akparamagwa a ndi Anambara kpara gosiri ihe bụ mmụọ Bịafra. Ime Bịafra abụghị sọọsọ iburu ọkọrọtọ na-akpagharị n’okporo ụzọ nakwa ịma ndi ọrụ nchekwa obodo, ndi na-achọbu ụzọ iji belata ọnụ ọgụgụ Ndigbo aka n’ihu.
Ọ kwa ụfọdụ sị na Igbo kpọrọ onwe ha asị? Keduzi ka ha siri menwuo ihe ịtụnanya nkea, nke dịzị ka ọ nyịrị ụmụnwanne anyị ndi Yoroba ka mamịrị siri nyị ọkụkọ?
Ụzụ amaghị akpụ ọgele leenu egbe anya n’ọdụ. Yaa bụ, ndi ndu ndi Yoroba kwesịrị ịmata na ihe a aghọọla ihe ihere ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịgba ụmụ ha ndi na-azọ ọkwa Gọvanọ n’Ọsụn izu, ọ kacha Sinetọ Ademọla Adeleke nke PDP n’ogbo ya Iyiọla Omishore nke SDP.
Keduzi ka obi ga-adịzị Awolowo na ndi ochiedike ndi Yoroba ndi ọzọ laworo mmụọ ebe ndi be ha na-agbazi ajọ egwu?
Keduzi ka izu nile ndi Yoroba, Ndigbo, ndi Mba Mmiri nakwa ndi Obinetiti na-achị maka ịchụpụ Buharị nọkwa tinyekwara Nhazigharị Usoro Ọchịchị ( Restructuring ) ga-esi nwee isi ma ọ bụrụ na oke mba dịka Yoroba enweghị ike ịchị izu ma mekwaa ihe chịtara n’izu? N’Ekiti nakwa Ọsụn, ha emenwughi ihe Igbo mere n’Anambara.
Sinetọ Iyiọla Omishore
Nkea na arụtụkwa aka na ndi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mmegide nile (opposition parties ) kwesịrị ijikọ aka ọnụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịchụpụ Onyeisiala Muhammadu Buharị na nhọpụta Onyeisiala nke afọ na-abịanụ.
Igbo sịkwa na “mkpara a kụrụ n’ala bụ ezemmụọ ka a kụrụ ya n’isi”. Ndi PDP, ọma akwa asa ahụ mara onwe ya. Dịka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mmegide nke mbuuzọ, ọ bụ oke n’ọrụ dịịrị ha ịhụ na ha chịkọbara ụmụ Naịjiriya nile ndi chọrọ iwepu Buharị ka ije were kwe ọgịga.
Mana kedu ka ha ga-esi achịkọtanwu ndi ọzọ ebe ọgụ maka iwepụta onye ga-azọrọ ha onyeisiala na-achọ itisa ha.
Na mmechi, hoo!haa!! na-ebunye ụmụ igbo nile,ọ kacha ụmụ Anambara ụkpa ekele pụrụ iche maka ịbụ “ekwueme” nakwa ” omekannaya “. Igbo ndi ọma, ndi ọma, unu nwee aka a, aka unu kwa a! Onye mee ihe dị egwu, ọ bụrụ odogwu! Onye mee ihe dị ike, ọ bụrụ dike! Igbo, unu bụ odogwu, bụrụkwa dike, hoo!haa!!
Previous Post: AKWA(CRY)/AKWA (CLOTH)/ AKWA( BED)
Next Post: BUHARỊ KWARA LAA; NEF,ỌHANEZE,AFENIFERE